Fomba fanao tsara indrindra 6 hampitomboana ny fiverenan'ny fampiasam-bola (ROI) amin'ny marketing mailakao | Martech Zone
Rehefa mitady fantsom-barotra miaraka amin'ny fiverenana maharitra sy azo vinavinaina indrindra amin'ny fampiasam-bola, dia tsy mijery lavitra noho ny marketing mailaka ianao. Ankoatra ny maha azo fehezina dia mamerina anao ihany koa $42 isaky ny $1 lany amin'ny fanentanana. Midika izany fa mety hahatratra 4200% farafahakeliny ny ROI kajy amin'ny marketing mailaka. Amin'ity lahatsoratra bilaogy ity dia hanampy anao izahay hahatakatra ny fomba fiasan'ny ROI marketing amin'ny mailaka - sy ny fomba hanatsarana azy io.
Inona no atao hoe ROI Marketing Email?
Ny ROI marketing amin'ny mailaka dia mandrakotra ny sanda azonao amin'ny fampielezan-kevitra mailaka raha oharina amin'ny sanda laninao amin'izy ireo. Izany no fomba ahafantaranao hoe rahoviana no mandaitra ny fampielezan-kevitrao, ahitana hafatra mety, ary mahasarika karazana mpividy mety – na rehefa tonga ny fotoana hijanonana sy hanandrana paikady hafa azo ampiharina kokoa.
Ahoana ny fomba kajy ROI marketing amin'ny mailaka?
Azonao atao ny mikajy ny ROI-nao amin'ny alàlan'ny rôle tsotra:
Andao atao hoe, mandany manodidina ny $10,000 ianao amin'ny fanitsiana tsara ny boaty mailakao, ny fandrafetana ny maodely, ary ny fandefasana mailaka ara-barotra amin'ny mpampiasa anao - izany no sandanao nandaniana na ny isan'ny vola ampiasainao amin'ny fantsom-barotra mailakao.
Mahazo $300,000 avy amin'ireo mpanjifa niova fo tamin'ny fampielezanao tao anatin'ny iray volana ianao. Ity no sanda nahazoanao, na ny vola azonao avy amin'ny fampielezan-kevitra momba ny varotra mailaka ao anatin'ny fe-potoana manokana. Nahazo ny singa roa lehibenao ianao, ary afaka manomboka izao ny majika.
Noho izany, araka ny asehon'ny formula anao, ny salan'isa ROI avy amin'ny fanentanana ara-barotra dia $29 isaky ny dolara aloanao. Ampitomboy ny isa amin'ny 100. Ankehitriny fantatrao fa ny fandaniana $ 10,000 amin'ny fanentanana ara-barotra dia nitondra anao fitomboana 2900% izay nitarika anao hahazo $ 300,000.
Inona no maha-zava-dehibe ny ROI marketing amin'ny mailaka?
Misy antony mazava - tokony ho fantatrao fa mahazo mihoatra noho izay omenao ianao. Ny fahatakaranao ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola dia ahafahanao:
Mahazoa sary mazava tsara momba ny mpividy anao. Rehefa fantatrao hoe iza amin'ireo paikadin'ny marketing amin'ny mailaka no miasa, fantatrao izay manentana ny fanantenanao ary manosika azy ireo handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Noho izany, manao fahadisoana vitsy kokoa ianao rehefa mamantatra ny maha-olona mpividy anao na manomana hafatra ara-barotra - ary mampihena ny fotoana ilaina amin'ny vinavina hirosoana amin'ny lalan'ny varotra.
Ampitomboy ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Raha te hahazo fitsidihana bebe kokoa amin'ny tranokalanao ianao dia SEO no zavatra voalohany tonga ao an-tsainao. Na izany aza, mila fotoana sy asa an-taonany ny SEO alohan'ny hanombohany mitondra vokatra. Ny fanentanana marketing amin'ny mailaka dia afaka mampiditra haingana ny mpihaino kendrenao amin'ny vavahadin-tseraseranao haingana sy mora amin'ny alàlan'ny fanolorana zava-tsarobidy ho an'ny mpandray tsirairay, mamporisika azy ireo hijery anao, ary hikaroka ny loharanom-baovao rehetra momba anao sy ny marikao.
Zarao ny mpihaino kendrenao. Arakaraka ny ahafantaranao ny mety ho mpanjifanao no mora kokoa aminao ny mamorona votoaty kendrena ary manolotra zavatra manokana ho an'ny vondrona tsirairay. Mety misy mpividy vaovao na mpanjifa efa ela izy io, ary azonao atao ny misafidy ny mpanjifa mamaly indrindra ary mamporisika ireo mpividy mavitrika indrindra. Midika izany fa afaka manangana ny fiovam-ponao sy ny tahan'ny kitiho tsy misy ezaka ianao.
Mitadiava fahafaha-manao manokana kokoa. Tena zava-dehibe ny personalization amin'ny tombombarotra sy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka. Araka ny Smarter HQ, manodidina ny 72% amin'ny mpanjifa ihany no mifandray amin'ny mailaka ara-barotra manokana.
Fomba fanao tsara indrindra hampitomboana ROI marketing amin'ny mailaka
Tsy tafapetraka amin'ny vato ny ROI-nao, sa tsy izany? Azo ahitsy sy ampitomboina izany amin’ny alalan’ny fandraisana fepetra mifanaraka amin’izany. Noho izany, rehefa mahazo ROI ampy ianao dia afaka manomboka miasa amin'ny fananganana ny fahombiazanao amin'ny alàlan'ny famaritana ireo teboka manan-danja indrindra amin'ny fampielezan-kevitra momba ny marketing amin'ny mailaka ary manindrona sanda bebe kokoa amin'izy ireo. Misy fomba maro hanaovana izany, ary hanazava ny fomba fanao malaza indrindra isika.
Fomba fanao tsara indrindra 1: Ampiasao ny herin'ny angona
Tsy afaka mamaky ny eritreritr'ireo mpihaino kendrenao ianao – ary raha azo atao ny telepathy dia mbola hanohitra mafy an'izany izahay. Ny zavatra rehetra ilainao dia hita ao anaty dobo data roa. Samy misy anao avokoa izy roa ireo ary misy fanazavana sarobidy momba ny fitondran-tenan'ireo ho avy.
Data mpitsidika tranokala. Ireo mpampiasa tonga ao amin'ny tranokalanao ary mandalina ny pejy tsirairay dia mety ho lasa mpanjifanao tsara indrindra - raha toa ianao ka mahavita manatsoaka hevitra izay nahaliana azy sy manome azy ireo izay tadiaviny. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy manana drafitra momba ny tanjon'izy ireo fototra, ny demografika ary ny laharam-pahamehany ianao ary ampiasao izany fahalalana izany mba hampifanaraka ny modelyo. Azonao atao ny mianatra ny mpitsidika isan'andro amin'ny alàlan'ny Google Analytics. Izy io dia fitaovana tsy maintsy ananana ho an'izay te-hahafantatra bebe kokoa momba ny toerana nihavian'ny mpitsidika azy, izay pejy jereny matetika, na mpitsidika indray mandeha izy ireo na miverina isan'andro na isan-kerinandro. Miaraka amin'ny fampahalalana toy izany eo am-pelatananao, dia ho azonao tsara kokoa ny mampirehitra ny fahalianan'ny mpihaino kendrena anao ary mamadika ny mpitsidika ho mpanjifa.
Data fanentanana. Aza atao tsinontsinona mihitsy ny vaovao azon'ny fanentanana teo aloha omena anao. Ny fitaovana sasany dia mampiseho anao:
Ny karazana fitaovana ampiasaina hijerena ny hafatrao;
Rehefa ny mpampiasa no mavitrika indrindra rehefa mifandray amin'ny mailakao;
Inona avy ireo rohy nahatonga ny fifandraisana manan-danja indrindra;
Ny isan'ny mpanjifa niova fo;
Ny fividianana nataon'ireo mpividy niova fo.
Ity angona ity dia ahafahanao manome ny fanombanana ny zava-bita marina indrindra sy ny fifandraisana mavitrika azo antoka eo amin'ny mpandray anao sy ianao. Izany dia mitondra antsika amin'ny fanao manaraka amin'ny fampitomboana ROI marketing amin'ny mailaka.
Fomba fanao tsara indrindra 2: Ataovy laharam-pahamehana ny fahafaha-manatitra lehibe
Tsy afaka miresaka momba ny ROI ianao raha tsy efa matoky ny fahafahanao. Tsy hanorina ny tenany; mila miasa amin'ny lafin-javatra maro ianao mba hahazoana fahombiazana tsara ary hahita vokatra ny fampielezanao. Arakaraky ny handefasanao ny boaty mailaka, dia vao mainka ny fanamby atrehanao.
Ny fandefasana mailaka dia ny teny ampiasaina hamaritana ny isan-jaton'ny mailaka tonga ao amin'ny boaty fidirana ho an'ny mpandray anao. Mifantoka amin'ny mailaka omena fidirana amin'ny boaty fidirana ary hitan'ny mpandray. Izany indrindra no antony maha-zava-dehibe ny fandefasana mailaka rehefa manombana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra momba ny varotra mailaka.
Ny fandefasana mailaka dia misy fepetra marobe izay tokony hofenoina alohan'ny ahafahanao manisa ny hafatrao ho tonga sy mandray anjara amin'ny fahombiazanao.
Lazan'ny mpandefa. Maro ny mpandefa afaka mandefa mailaka, fa ireo tena azo itokisana ihany no afaka manatratra ny mpandray azy. Ny lazan'ny mpandefa tsara dia avy amin'ny sehatra salama sy adiresy IP voatokana azo antoka, ary hetsika mailaka tsy miovaova, tsy miovaova ary ara-dalàna.
Authentication protocols. Rehefa tsy afaka mamaritra raha avy amin'ny sehatra voalaza ao amin'ny adiresin'ny mpandefa ny mailaka dia alefa any amin'ny lahatahiry spam ny hafatra. Ny famantarana marina dia mitaky firaketana DNS, toy ny firaketana SPF, sonia DKIM, ary politika DMARC. Ireo firaketana ireo dia manampy ny mpandray hanamarina ny mailaka miditra ary manaporofo fa tsy nosoloina na nalefa tsy fantatry ny tompon'ny sehatra.
Ny fandefasana mailaka tsara dia tsy mijanona amin'ny fandefasana hafatra any amin'ny boaty fidiranao. Anisan'izany ireto manaraka ireto:
Isan'ny bitsika malefaka sy mafy. Indraindray, tsy ela taorian'ny nandefasanao ny mailaka, dia mahazo miverina ny sasany amin'izy ireo, na noho ny olana vonjimaika, toy ny olan'ny mpizara, ny fahatapahan'ny fandefasanao ny fandefasanao na ny boaty fidirana feno (fandotoana malefaka), na ny olana amin'ny lisitry ny mailakao, izany hoe, mandefa any amin'ny adiresy mailaka tsy misy (fanenjehana mafy). Ny fandoroana malefaka dia mitaky anao hihena sy hanitsaka amim-pitandremana mba hijanonana amin'ny fahasoavana tsaran'ny ISP-nao, raha toa kosa ka hanimba ny lazanao amin'ny maha mpandefa anao ny fandoroana mafy. Mba hitazonana ny fandefasana mailaka tsara dia tsy maintsy miantoka ianao fa tsy mitsambikina ny mailakao.
Imailaka maromaro no nandeha mivantana tany amin'ny Inbox. Midika izany fa tsy miditra ao anaty lahatahiry Fako izy ireo na tratran'ny fandrika spam. Mitranga foana ny zavatra toy izany, nefa mbola miharihary amin'izy ireo ny mpandefa, ka manimba ny fanafahana azy ireo tsy fantany.
Fifandraisana mailaka/mailaka maromaro nosokafana. Inona no tanjon'ny mailaka alefanao raha tsy misokatra mihitsy? Ny hafatrao dia mikatsaka tanjona iray manokana, ary rehefa tsy tratra io tanjona io dia tsy misy dikany amin'ny fahafaha-manaonao izany. Ny andraikitrao dia ny hahazoana antoka fa afaka mahita ny mailakao ny vinavinao ary tena liana amin'ny fanokafana azy ireo sy ny famakiana ny atiny izy ireo.
Noho izany, raha te hanatsara ny ROI marketing ianao dia manontania tena:
Efa nanamboatra ny protocole fanamarinana mailaka ve aho araka ny tanjon'ny marketing mailaka?
Efa ampy ve ny fampielezan-kevitra fanafanana?
Madio ve ny lisitry ny fandefasana ahy?
Manana ny KPI rehetra ve aho eo imasoko?
Manana fitaovana hanamarinana lisitra mainty ve aho?
Mazava ho azy fa mila fotoana izany hanatratra avo deliverability. Ny vokatrao amin'izao fotoana izao dia mety ho ampy hahazoana ROI tsara, fa raha te-ho tsara kokoa sy haingana kokoa ary matanjaka kokoa ianao, dia tokony hanara-maso ny fandrosoanao ianao, ho vonona handray andraikitra fanampiny, ary aza kivy amin'ny tenanao. hetsika famanam-batana.
Fomba fanao tsara indrindra 3: Manangana lisitra mailaka mifantoka indrindra
Ity paikady ity dia manan-danja indrindra ho an'ny orinasam-barotra (B2B) mailaka marketing. Rehefa mandefa hafatra amin'ny olona iray ianao, dia tianao izy ireo ho olona mety, mendrika ny hampiasanao ny fotoananao sy ny ezakao, ary afaka mandray soa avy amin'ny tolotrao. Tsy misy ratsy kokoa noho ny fandefasana mailaka aorian'ny mailaka amin'ny olona iray nofaritanao ho mpanapa-kevitra raha tsy fantatrao fa tsy miasa ao amin'ny orinasa lasibatra intsony izy ireo! Arakaraky ny adiresy tsy misy ifandraisany amin'ny lisitrao no hidina ny tahan'ny fandraisanao anjara.
Manangona angona manokana kokoa miaraka amin'ny fitaovam-pandinihana varotra ary ny fikarohana lalina dia ahafahanao mitazona ny lisitry ny fandefasanao ho madio sy sarobidy. Matetika, midika izany fa tsy maintsy manao fikarohana mialoha ny fivarotana ianao amin'ny alàlan'ny fanatrehana ny pejin'ny LinkedIn misy olona toa ny mpanapa-kevitra tonga lafatra, manangona sy manamarina ny angona fifandraisana. Mazava ho azy fa tsy ny olon-drehetra no manam-potoana hanaovana izany - tsara fa manana ekipa avy any ivelany ianao hanampy anao.
Fomba fanao tsara indrindra 4: Mampiasà fomba sy tonony mihoatra ny iray
Raha miresaka momba ny personalization ianao, dia arakaraka ny ahafantaranao ny fizarana tsirairay amin'ny mpihaino anao, ny fahatakaranao bebe kokoa ny tonony sy ny feon'ny safidiny. Ny sasany amin'ireo vinavinao dia mety hifikitra amin'ny votoaty hita maso kokoa, fa ny hafa kosa aleony fomba laconic kokoa. Ny mpampiasa sasany dia mino ny fanadihadiana momba ny tranga sy ny porofo ara-tsosialy, ny hafa kosa mila famerenana amin'ny antsipiriany sy votoaty fanabeazana maro alohan'ny hiheverana anao ho mpivarotra azo itokisana.
Ny votoaty dia mamela anao haneho hevitra sy hiresaka momba ny serivisinao amin'ny fomba famoronana, koa aza misalasala mamela ny tenanao handeha sy hiasa amin'ny karazana votoaty samihafa ho an'ny karazan'olona, ​​mpanjifanao ary mpanjifanao. Afaka mandeha ianao raha mbola ny anao môdely aza mandika ny torolalana momba ny mailaka, mitahiry teny mandrisika spam, na mitobaka amin'ny rohy tsy ilaina.
Iza amin'ireo lafiny amin'ny mailakao no tokony hatao manokana foana?
Lohahevitra. Ity no mpisarika ny saina ho an'ny mpandray rehetra izay manamarina ny boaty fidirana. Arakaraky ny ampanantenainy ny maha manokana azy, dia vao mainka mety hisokatra ny mailakao. Ny andalana tena manan-danja dia asa kanto: tsy manelingelina, tsy mivarotra be loatra, maka fanahy anao amin'ny fampanantenana sanda tokana, ary mazava tsara momba ilay olona nandefa mailaka sy ny tanjony.
Identité mpandefa. Aza omena adiresy avy amin'ny:name@gmail.com fotsiny ny mpandray anao. Omeo azy ireo ny anaranao, ny anaram-boninahitrao, ny anaran'ny orinasanao ary ny sarinao. Na inona na inona ampahan'ny mpihaino kendrenao dia tsy maintsy fantatr'ireo vinavinanao hoe iza no iatrehany. Rehefa ny adiresy mailakao ihany no hitan'izy ireo, dia mety manomboka mieritreritra izy ireo fa miresaka bot.
Visuals. Azonao atao ny mampifanaraka ny atiny hifanaraka amin'ny safidin'ny mpampiasa amin'ny loko na manao endrika endrika môdelin'ny mailaka manokana ho an'ny lahy sy vavy (indrindra raha mivarotra zavatra mifanaraka amin'ny lahy sy vavy ianao na manolotra tombontsoa ho an'ny vondrona manokana). Saingy mitandrema, na izany aza - tsy ny serivisy mailaka rehetra no manohana ny format HTML.
Teny jargon sy matihanina. Rehefa fantatrao ny momba ny indostria sy ny faritra iasan'ny mpandray anao, dia azonao ny teny izay maneno lakolosy ho azy ireo. Noho izany, azonao atao ny manampy zatra bebe kokoa amin'ny môdely anao, mampiseho fa tena liana amin'ny olany andavanandro ianao ary mahafantatra ny laharam-pahamehany.
Fomba fanao tsara indrindra 5: Tazony ho tsara ho an'ny finday ny fiaraha-miasa
Koa satria niresaka momba ny safidintsika isika, dia tokony hanaiky ny vanim-potoanan'ny finday iainantsika. Ny mpividy sy ny mpandraharaha dia mampiasa ny fitaovany mba hividianana, hitantana ny fizotrany, ary, eny, hanamarina mailaka. Noho izany, raha tsy azo jerena amin'ny finday avo lenta ny mailakao, dia tsy mahita mpividy maro ianao. Ny mpampiasa antonony dia tsy manam-paharetana - raha maka 3 segondra mahery izy ireo vao mampakatra mailaka na raha tsy mahafa-po ny famakiana azy dia hanidy izany avy hatrany izy ireo ary hifindra amin'ny hafatra hafa tsara kokoa.
Mba hahazoana antoka fa mora amin'ny finday ny hafatrao, avelao ny mpamorona tranonkala sy ny talen'ny zavakanto hijery azy ireo, ary jereo ny fomba ahafahana manatsara azy ireo sy mampifaly kokoa ny mpihaino anao.
Fomba fanao tsara indrindra 6: Mampiasà automatique marketing amin'ny mailaka
Ity fomba fanao ity dia tena ilaina ho an'ny mpandraharaha amin'ny mpanjifa (B2C) paikady ara-barotra, indrindra amin'izao fotoana izao rehefa miroborobo ny e-varotra. Izany no antony automation marketing Ny endri-javatra dia matetika atolotry ny mpanome tolotra mailaka maro (ESPs). Ireo endri-javatra ireo dia ahafahana:
Fandaharana mailaka. Reraky ny miandry handefa vaovao sy hafatra fampiroboroboana amin'ny fotoana mety? Tsy voatery ianao. Ny firafitry ny automatique dia mamela anao hisafidy ny fotoana mety, ampio ny lisitry ny fifandraisana, ary mialà sasatra, satria fantatrao fa tsy misy hatak'andro ny hafatra.
Mametraha mailaka transactional. Ny endri-javatra automation marketing amin'ny mailaka dia manara-maso ny tantaran'ny fividianana ny mpampiasa ary mamorona faktiora, mailaka fanamafisana, fampandrenesana ary fampandrenesana mamela ny mpividy tsirairay niova fo hameno haingana ny fanapahan-kevitry ny mpividy na hanohy hifanerasera amin'ny tranokala.
Alefaso fampandrenesana sarety nilaozana. Ity karazana hafatra ity dia fitaovana remarketing mahery vaika izay manampy anao hisambotra ireo mpitsidika tranokala izay tsy nanapa-kevitra. Voatarika isaky ny misy entana iray ampidirina amina sarety virtoaly fa tsy aroso lavidavitra kokoa, ny mailaka avelany sarety dia manosika moramora ny mpampiasa handray andraikitra ary mampiseho fa zava-dehibe ny safidiny.
ROI marketing mailaka
Ny ROI marketing amin'ny mailaka dia KPI sarobidy sy azo fehezina izay afaka mampiseho aminao ny fandrosoanao amin'ny tondrozotra momba ny varotra mailaka - ary firy ny fanamby miandry. Mamela anao hizara ny volanao eo anelanelan'ny fantsona fivarotana amin'ny fomba mahomby araka izay tratra ary mamporisika anao hanandrana bebe kokoa.
Manantena izahay fa ireo fomba fanao voatanisa eto dia hanampy anao hahatratra ny tanjonao amin'ny varotra ary hanentana anao hihoatra ny vokatrao ankehitriny. Mba hanamafisana ny fampielezan-kevitrao sy hahazoana antoka fa tsy misy antsipiriany mandalo anao, dia manoro hevitra izahay hanandrana ny fanaonao miaraka Folderly. Io no sehatra manambatra ny fitiliana ny fandefasana mailaka miaraka amin'ny famahana ny olana momba ny spam, ny famakafakana amin'ny toerana tena misy, ny fampidirana amin'ny ESP lehibe, sy ny maro hafa.
Mirary soa, ary enga anie ny herin'ny ROI ho aminao!
Manomàna Demo Folderly
Disclosure: Martech Zone manana fiaraha-miasa amin'ny Folderly ary mampiasa rohy referral izahay mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: fampandrenesana sarety fiantsenana nilaozanafanamarinanamailaka b2bb2cb2c mailakaangona fanentananafanateranamailakamailaka click-throughmailaka ctrmailaka mailakafandraisana an-tanana amin'ny mailakalisitry ny mailakamailaka Marketingmisokatra ny mailakafanentanana mailakapersonalization mailakamailaka fandaharam-potoanafizarana mailakafomba mailakatsipika momba ny mailakamailaka modelytonony mailakamailaka sarymailaka mafanaESPmitsambikina mafyfametrahana boatyip mafanaautomation marketingmailaka findayfiverenana amin'ny fampiasam-bolaROINy tsenan'ny varotravarotra varotrafandaharam-potoana mailakafamantarana ny mpandefalazan'ny mpandefamiboiboika malefakamailaka transactionalangon'ny mpitsidika
Ny fahendren'ny fandraharahana am-polony taona maro nananan'i Vlad sy ny traikefa amin'ny fananganana orinasa dia nahafahan'i Vlad nanoro hevitra tamim-pahombiazana ny vondron'olona tompona orinasa isan-karazany, sy ireo mpandraharaha amin'ny fampitomboana ny orinasany. Manam-pahaizana fanta-daza amin'ny sehatry ny fanovana ny kolontsain'ny fandaminana sy ny fampandrosoana ny fitarihana, B2B Sales, Marketing, nandany mihoatra ny 10 taona nanorenana vokatra teknolojia, manana fiaviana amin'ny tambajotram-pifandraisana sy injeniera fitaovana elektronika.
Ny biraoko an-trano sy ny teknolojia ho an'ny fandraketana horonan-tsary, fihaonambe ary podcasting